Joogtay: Xalka Suuqgeynta Macluumaadka Maqalka ee Sumadaha Shirkadaha | Martech Zone
Joogtay: Xalka Suuqgeynta Macluumaadka Maqalka ee Magacyada Shirkadaha
Khamiis, May 6, 2021 Tuesday, May 11, 2021 Lindsay Tjepkema
Waxaa laga soo saaray fikirka ah in wada hadalka uu ahaado kan marin dhammaan waxyaabaha suuqgeynta ah, La tuuray waa barta kaliya ee suuq geynta waxyaabaha loo dhisay si loogu xoojiyo suuqleyda inay helaan, weyneeyaan, oo ay u nisbeeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin noocyada 'podcast' si ay u sii shidaan istiraatiijiyadooda suuq geynta oo dhan.
Si ka duwan xalalka kale ee suuqgeynta suuqgeynta, kuwaas oo loo dhisay inay ka caawiyaan suuqleyda inay sii daayaan waxyaabo badan oo qoran, La tuuray waxay u suurta galisaa suuqleyda inay noqdaan kuwo wax ku ool ah oo wax ku ool ah adoo qaadaya habka maqalka-koowaad. Iyada oo la adeegsanayo barnaamijka loo yaqaan 'Casted platform', suuqleyda ayaa ka faa'iideysan kara awoodda wada hadalka si ay u abuuraan waxyaabo hodan ah, khuseeya, khibrad khabiir ku ah u adeegida ujeedo isla markaana u keenta natiijooyin la xaqiijiyay.
Guudmarka 3 A
Tallaabada ugu horreysa waa in la duubo wadahadal lala yeesho khabiir maaddo ah. Halkaas, waxyaabaha ku jira wadahadalkaas looma daabici karo oo keliya sida podcast-ka, laakiin sidoo kale waxaa dib loogu soo celin karaa tiro badan oo ka mid ah ilaha suuq-geynta sida qoraalada mareegaha, waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada, eBooks iyo in ka badan.
Casted wuxuu siinayaa suuqleyda inay si dhab ah ugu soo noqdaan maalgashiyadooda Podcast iyadoo loo marayo koror helitaanka nuxurka maqalka ah ee ay u isticmaali doonaan xubnaha kale ee kooxda, waaxaha, iyo la-hawlgalayaasha hay'adda. Madashu waxay bixisaa siyaabo badan oo loo maro xoojin waxyaabaha ku jira kanaallada kale. Ugu dambeyntii, Casted wuxuu bixiyaa wax aan horay loo arag dhaca taasi waxay muujineysaa saameynta ay ka kooban tahay waxyaabaha ku saabsan astaanta iyo ganacsiga.
Helitaanka: Ku xir awoodda fikradaha aad ka soo xaroonayso wadahadallada lala yeelanayo khubarada warshadaha, macaamiisha, hoggaamiyeyaasha gudaha, wada-hawlgalayaasha, iyo inbadan oo ku saabsan qoraalkaaga adoo ka dhigaya waxyaabaha ay heli karaan xubnaha kale ee kooxda, waaxyaha, iyo la-hawlgalayaasha hay'adda.
Xoojin: Ku kala qaad wadahadal kasta oo ku saabsan waxyaabaha gaarka ah ee hodanka ku ah aragtidaada iyo khibraddaada qiimaha ugu badan ee dhagaystayaashaada si loogu isticmaalo marin kasta oo suuq ah.
sifo: Fahmitaan saameynta ay sumaddaada Podcast-ku ku leedahay meheraddaada iyada oo la adeegsanayo xog ficil ah sida dhibcaha ka-qaybgalka iyo falanqaynta dhagaystayaasha
Adoo adeegsanaya nuxurka 'podcast', ujeedku waa in suuqleyda ay abuuraan istiraatiijiyad isku dhafan, mid ay kexeyso kheyraad (podcasts) mar hore ayay ku bixinayaan waqti iyo dadaal.
Suuqgeynta Wadahadalka Practices Best
Ku Bilow Wadahadal
Laga soo bilaabo hal barxad dhexe, kooxaha suuqgeyntu waxay ka faa'iideysan karaan fikradaha gaarka ah ee lagu muujiyey wadahadalka lala yeelanayo khubarada - maahan oo keliya dhacdooyinka podcast, laakiin sidoo kale waxay shidaal u yihiin marinno kale oo badan oo suuqgeyn ah.
First, La tuuray waxay u adeegtaa sidii madal martigalinaysa summadaha 'podcast', daabacaadda qayb kasta oo loo yaqaan 'podcast players' sida Apple, Spotify, iyo Google, iyo u samaynta guri bandhigga websaydhka astaanta iyadoo loo marayo bogagga si toos ah loogu abuuray barxadda.
Halkaas, Casted wuxuu aad uga fog yahay martigelinta iyo isku xirka si loo siiyo marin u fududaanta nuxurka maqalka ah si loo wanaajiyo wada shaqeynta kooxaha oo dhan si loo kordhiyo farriinta ka timaadda dhacdo kasta iyadoo lagu sii ballaadhinayo kanaallada kale. Tan waxaa ka mid ah bogagga bandhigyada la beddeli karo, qoraal si loo taageero SEO iyo qoraallo dheeri ah, goos goos iyo u sameynta maqal maqalka ah ee warbaahinta bulshada, ku duubnaanta websaydhka iyo iimaylka, isku-darka aaladaha sida HubSpot, Drift, iyo WordPress, iyo waxyaabo kaloo badan.
Ugu dambeyntiina, Casted wuxuu bixiyaa cabbiro ku saabsan ka-qayb-galayaasha dhagaystayaasha, iyagoo ka caawinaya suuqleyda inay ugu dambayn fahmaan oo ay wadaagaan saamaynta ay podcast-ka iyo waxyaabaha la xiriira ay ku sameynayaan astaanta iyo ganacsiga.
U adeegso Podcasting sida khadka tooska ah
Xarunta dhexdeeda, Podcasting brand waa dahab suuqgeyn: wadahadal dhab ah oo lala yeesho khabiiro muujinaya fikradaha asalka ah, fikradaha fulinta, iyo sheekooyinka macaamiisha. Iyada oo la adeegsanayo fikradahaas xoogga leh, boodhadhku waa inay udub dhexaad u noqdaan istiraatiijiyadda astaanta, iyaga oo sii shidaya dhammaan waxyaabaha kale.
Marar aad u badan, in kastoo, fiidiyowyadan la xareeyay. Waxyaalaha maqalka ah waa laga qufulay inta ka hartay astaanta astaanta waxaana ka tagaya kooxda inteeda kale. Sababta Sababtoo ah aaladaha loo yaqaan 'podcast' looma sameynin kooxaha suuqgeynta iyo barnaamijyada suuqgeynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin looma sameyn inay la shaqeeyaan kumbuyuutarrada. Ma jirto hab fudud oo kooxuhu ku heli karaan waxyaabahaas oo ay uga isticmaali karaan kanaallada kale.
Gali Casted, madal kaliya ee suuq-geynta suuq-geynta loo dhisay si loogu xoojiyo suuqleyda si ay u helaan, u weyneeyaan, uguna sifeeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin 'podcast' inay shidaal u yihiin istiraatiijiyaddooda suuq-geynta oo dhan. Iyadoo la adeegsanayo habka ugu horreeya ee maqalka ee suuq-geynta waxyaabaha la soo bandhigayo, podcasting-ka nooca loo yaqaan 'podcasting brand' wuxuu u dhaqmaa sidii khariidad dhammaan marinnada kale ee maaddooyinka ah
Qodobka Caddaynta Podcast
Wadahadalku wuxuu fududeeyaa isku xirnaanshaha kaliya shakhsiyaadka dhabta wada hadalka la leh, laakiin sidoo kale qof kasta oo kale oo dhageysanaya. Dhagaystayaashu waxay xiriir la yeeshaan bini-aadamka wada hadalkaas iyo sidoo kale sumadda ka dambaysa dhammaantood.
Xiriiradaani waxay sii shidayaan beddelaad. Marka dhagaystayaashaas ay dareemaan inay ku xiran yihiin astaanta, waxay u badan tahay inay ku sii socdaan inay noqdaan macaamiil. Qaado daraasaddan ay sameeyeen BBC ayaa soo gabagabeysay:
Noocyada lagu xuso Podcast-ka ayaa celcelis ahaan keena:
16% kaqeybgal sareeya iyo 12% xasuusin sare oo kaqiraya waxyaabaha ku xeeran. Tani waa saameyn gaar ah, maaddaama jaangooyooyinka raadiyaha caalamiga ahi muujinayaan in calaamaddu ay sheegayso celcelis ahaan dhibcaha 5% ka hooseeya waxa ku jira.
Dabeecada dhow iyo wada hadalka ee jawiga Podcast-ka wuxuu abuuraa xaalad sare oo hawlgal ah oo loogu talagalay soo qaadashada sumadaha. Tani waxay sidoo kale wadataa qiyaasta astaanta guud ahaan guddiga, iyadoo gacan ka geysaneysa abuurista wiishashka wacyi-gelinta (↑ 89%), tixgelinta calaamadaha (↑ 57%), sumcadda sumcadda (↑ 24%), iyo ujeedo iibsi (↑ 14%).
94% dhagaystayaashu waxay cunaan podcodka iyagoo fulinaya howlo kale
Dadku waxay dhegeysanayaan podcasts iyo cawska ay jarayaan, socod ku socdaan, dhar isku laalaabanayaan, ama xitaa shaqeynayaan. Tani waxay ka dhigan tahay magacyada abuuraya kaqeyb galinta, boodhadhka xiisaha leh waxay awood u leeyihiin inay waqti dheeri ah la helaan dhagaystayaashooda.
Jadwal Demo Casti ah Maanta
Tags: helitaankasifoaudiowaxyaabaha maqalka ahtuurtayContent Suuqganacsixalalka shirkaddapodcasttirakoobka Podcastxeeladaha Podcastistaraatijiyad Podcastisku dhafka Podcastpodcastingis-biirintacontent content
Lindsay Tjepkema waa agaasimaha guud iyo aasaasaha shirkadda 'Casted', oo ah madal suuq geyntii ugu horreysay oo keli ah ee lagu dhisay hareeraha sumadaha sumadaha. Iyadoo in ka badan 15 sano oo khibrad ah u leh suuqgeynta B2B, oo ay ku jirto socodsiinta wakaaladeeda la-talinta, iyadu waa hoggaamiye firfircoon oo leh guul weyn oo dhismo ah iyo kororka kooxaha suuqgeynta heer maxalli ah iyo heer caalami ah. Ka dib markii ay u soo saartay shirkad suuq geyn caalami ah summad sumadeed, Lindsay waxay xaqiiqsatay hamigeeda wada hadalka dhabta ah. Tani waxay u horseedday inay aasaasto shirkadda 'Casted' si ay uga caawiso suuqleyda inay furfuraan karaanka buuxa ee waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyagoo ka faa'iideysanaya awoodda faallooyinka. Shirkaddu waxay tan iyo markii ay ka heshay kala-goynta degdegga ah noocyada doonaya inay abuuraan xiriir weyn oo lala yeesho dhagaystayaashooda iyadoo loo marayo wadahadal dhab ah.
Botco.ai: Xalka Suuqgeynta Wadahadalka ee HIPAA ee Ku-Haboon
Muddooyinkii u dambeeyay: Si otomatig ah u Abuur, U habee oo Ula wadaag Waxyaabaha Cusboonaysiinta Warbaahinta Bulshada adoo adeegsanaya AI iyo Nuxurka jira